खोप अभियानलाई देशव्यापी बनाइँदै : RajdhaniDaily.com - खोप अभियानलाई देशव्यापी बनाइँदै
Home Breaking News खोप अभियानलाई देशव्यापी बनाइँदै
२ करोड १८ लाख नागरिकलाई खोप लगाइने
काठमाडौं । कोरोनाविरुद्ध खोप ल्याएर वितरण गर्न सफल भएको सरकारले भ्याक्सिन अभियान सफल हुँदै गएको भन्दै यो अभियानमा संलग्न भई सफल बनाउन सबै पक्षमा आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ करोड १७ लाख नागरिकलाई कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध खोप लगाउने महŒवाकांक्षी योजना ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रधानसम्पादक तथा सम्पादकसँग अन्तरसंवाद गर्दै खोप अभियानलाई सफल बनाउन देशव्यापी रूपमा सकारात्मक प्रचारसहितको अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले नागरिकलाई जोखिमबाट मुक्त गराउने उद्देश्यसहित ठूलो मिहिनेत गरेर खोप ल्याउन सफल भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने र कुनै प्रकारको अनियमितता हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले तीन वटै सरकारको समन्वयमा भ्याक्सिन अभियानलाई छिटै देशव्यापी बनाउँदै नागरिक स्तरमा सरकार रहेको प्रत्यक्ष अनुभूति दिइनेगरी काम गर्ने बताए ।
–४८ अर्व ८३ करोड खर्च हुने अनुमान
– दोस्रो मात्रा ७ वैशाखदेखि
– थप ५० लाख डोज खरिद गर्ने तयारी
– २३ फागुनदेखि दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणकालाई खोप
सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका कोभिड–१९ खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले कुल जनसंख्याको ७१.६२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनेगरी महŒवाकांक्षी योजना ल्याइएको जानकारी दिए । जसअनुसार २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ जनालाई खोप लगाइनेछ ।
सम्पूर्ण खोप व्यवस्थापनका लागि ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार ८ सय ८९ रूपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
हाल पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा रहेकाहरूलाई खोप लगाउने अभियान जारी छ । पहिलो प्राथमिकतामा कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, वृद्धाश्रममा आश्रित नागरिक, कैदी बन्दीहरू, पत्रकार, सफाइकर्मीलगायत रहेका छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा ५५ वर्ष र माथिका नागरिकहरू, ४० देखि ५४ वर्षको उमेर समूहमध्ये तोकिएका दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरू, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकहरू पर्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तेस्रो प्राथमिकतामा ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू, १५ देखि ३९ वर्षसम्मको उमेर समूह भएकाहरू पर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मार्गदर्शनअनुसार नै खोपको छनोट गरिनेछ । खोपको गुणस्तर, हाल भइरहेका खोप भण्डारणको पूर्वाधारसँगको अनुकूलता, कम लागत र खोपको उपलब्धतालाई खोप छनोटका आधारहरूको रूपमा लिइएको छ ।
नेपालमा कुन कुन खोप ?
हाल नेपालमा बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनिका नामको बायोफर्मास्युटिकल कम्पनीले विकास गरेको र भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित कोभिसिल्ड खोप उपयोगमा आएको छ । खोप विज्ञहरूका अनुसार यो खोप ७१ प्रतिशत प्रभावकारिता रहेको छ ।
हालसम्म देशभर ४ लाख २९ हजार ७ सय ५ जना नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाइएको छ । यो खोप कम्तीमा ८ साताको फरकमा दुई मात्रा लगाउनुपर्छ । पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि दोस्रो मात्रा पनि कोभिसिल्ड खोप नै लगाउनुपर्ने खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीले बताए । यो खोप दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो प्राथमिकताको पहिलो चरण र पहिलो प्राथमिकताको पहिलो चरणमा थप गरिएको (उपत्यकाभित्र) र पहिलो प्राथमिकताको दोस्रो चरणमा खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा आगामी वैशाख ७ देखि १५ सम्म दिइने प्रस्तावित योजना बनाइएको छ । यस्तै, दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरण आगामी २३ फागुनदेखि पहिलो मात्रा र २०७८ जेठ १७ देखि दोस्रो मात्रा दिइनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना तय गरेको छ ।
थप ५० लाख डोज छिट्टै
सरकारले थप ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । गत ८ माघमा भारतले १० लाख डोज खोप उपहारस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो भने सरकारले २० लाख डोज खोप खरिद गरी १० लाख डोज नेपाल ल्याइसकेको छ । बाँकी रहेको १० लाख डोज खोप पनि आउने क्रममा रहेको छ ।
सरकारले प्रतिडोज ४ डलरमा २० लाख डोज खोप खरिद गरेको थियो । कोभ्याक्समार्फत करिब १ करोड ३० लाख डोज खोप छिट्ट नेपाल आइपुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, पहिलो चरणमा भने केही दिनमा नै १९ लाख खोप आउने भएको छ । चीन सरकारले पनि ५ लाख डोज खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने वाचा दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको प्रधान सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा खोप अभियान र यसको प्रभावकारिताका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।
खोप लगाएपश्चात् केही व्यक्तिमा सुई लगाएको भागमा दुख्ने, सुनिने गाँठो पर्ने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने, मध्यम ज्वरो आए पनि गम्भीर प्रकृतिकोे असर नदेखिएको विज्ञ उप्रतीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ४ लाख २९ हजार जनामध्ये कसैलाई पनि स्वास्थमा गम्भीर समस्या देखिएन ।
खोप विज्ञहरूका अनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिता स्थापित नभएको कारणले दिन मिल्दैन । यस्तै, खोपको पहिलो मात्रापछि गम्भीर एलर्जी भएमा र यसभन्दा अघि अट्ट कुनै भ्याक्सिन, इन्जेक्टेबल थेराफिज, फुड आइटम्स, फर्मास्युटिकल प्रोडक्टसलगायतले गम्भीर एलर्जी भएमा र गर्भवती महिलालाई यो खोप दिनुहुँदैन ।
तर, पहिला कोभिड–१९ संक्रमण भएका व्यक्ति, दीर्घ रोग (मुटु, मस्तिष्क, फोक्सो, मिर्गौला रोग र क्यान्सर), रोग प्रतिरक्षा कमी वा एचआईभी भएका, बालबालिकालाई स्तनपान गराइरहेका आमालाई खोप दिन मिल्छ । खोप लगाएपछि हुन सक्ने अवाञ्छित घटनाका लागि आवश्यक व्यवस्था खोप केन्द्रमै गर्ने र प्रेषणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
काठमाडौँ । हरितालिका व्रतको तयारीस्वरुप आज दर खाने तयारीमा नेपाली महिला छन् । दरखाने दिनसँगै चारदिने तीज पर्व आजदेखि शुरु हुँदैछ । विशेषगरी नेपाली नारीले...
Editor-Picks भगीरथ भण्डारी - March 10, 2021 0
मुम्बई । प्रहरीले कमेडियन भारती सिंहलाई गिरफ्तार गर्नुको साथै, उनको घर खानतलासी गर्दा लागु औषध गाँजा भेटिएको जनाएको छ । प्रहरीले उनको श्रीमान हर्ष...
जनकपुरधाम । धनुषामा एक जना वडा अध्यक्षलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । आईतबार भारतबाट फर्केर घरमा बसेका जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नं.२ का वडा अध्यक्ष...
भर्खरै Dhruba Lamsal - June 7, 2020 0
शिव र शिवरात्री
बिचार विश्वनाथ खरेल - March 11, 2021 0
शिवरात्री विश्वभरका हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि महान् दिन हो । ब्रह्मान्डका सृष्टिकर्ता, सम्पूर्ण प्राणीका स्थितिकर्ता र जीवनको भोग सिद्धिएपछि संहारकर्ता परमात्मा शिव आर्यावर्तको परमपावन नेपालभूमिमा...
काठमाडौं । अहिले भारत लकडाउन भएको बेला बलिउडका कलाकारले दिल खोलेर सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारदेखि विपन्न मानिसलाई आर्थिक र खाद्यान्न सहयोग...
Not-to-be-missed Kumar Raut - November 14, 2020 0
तिहारै आयो लौ झिली मिली हे सुन हजुर भैलिनी आइन् आँगन... तिहारमा सबैभन्दा बढी बज्ने र गाइने गीत हो यो । चलचित्र स्वर्गको यो गीतलाई लोचन...